थाहानगरमा १ जेठमा १३ जना संक्रमित थपिएका छन् । थपिएकाहरुमा वडा नम्बर १ का २, ३ का २ र ६ का ७ जना छन् ।
त्यसैगरी कोरोना संक्रमितका कन्ट्राक्ट ट्रेसिङका आधारमा स्वाव संकलन गरि पिसिआरका लागि पठाइएकोमा २१ जनाको नेगेटिभ रिपोर्ट आएको डा. रिकेश कार्कीले बताए । पोजेटिभ भै होम आइसोलेशनमा बसेका ७ जनाको पिसिआर परिक्षणका लागि पठाइएकोमा फेरि ३ जना पोजेटिभ नै देखिएका छन् भने चार जना निको भएका छन् ।
थाहानगरमा १ जेठसम्मा २ सय जनामा संक्रमण देखिसकेको छ । तीमध्ये १२ जना निको भएका छन् । २ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना थाहानगर बाहिर उपचाररत छन् । १ सय ८० जना होम आइसोलेशनमा रहेको डा. कार्कीले बताए । होम आइसोलेशनमा रहेका सबै बिरामीहरुको अवस्था सामान्य छ ।
संक्रमित भएर १४ दिनपछि स्वाव दिएका बिरामीलाई नेगेटिभ रिपोर्ट नआउन्जेल घर बाहिर नहिड्न डाक्टरले आग्रह गरेका छन् ।